UTim Cook ubongoza uDonald Trump ukuba angahambi kwisivumelwano sezulu seParis | Ndisuka mac
UDonald Trump ubonakala ngathi khange ikholelwe into yokuba utshintsho lwemozulu luyinyani olusichaphazelayo sonke kwaye kukho amarhe ebesasazeka kwezi veki zidlulileyo, amarhe aqinisekisa ukuba i-United States ingarhoxisa inkxaso yayo yokuzibophelela, abalawuli abaliqela Iinkampani ezinkulu zobuchwephesha zaseMelika zinxibelelane noDonald Trump. NgoLwesibini odlulileyo, UTim Cook wanxibelelana noDonald Trump ukuba acele umongameli wase-United States ukuba angashiyi isivumelwano kwimozulu, isivumelwano apho amazwe angama-195 azibophelele khona. Ndiyabulela kwesi sivumelwano, ukukhutshwa kweegesi ezibangela isiphumo sokushisa okucuthayo kuya kuncitshiswa, nto leyo eya kuthi inciphise ubushushu behlabathi.
Kwisivumelwano esenziwe kwinkomfa yokugqibela yotshintsho lwemozulu, iUnited States yazibophelela ekwehliseni ukukhutshwa kwekhabhoni phakathi kwama-26 nama-28% kwishumi leminyaka elizayo. Amalahle njengomthombo wamandla yenye yezona zinto zingcolisayo emhlabeni. Ukusuka kwa-Apple bebesenza konke okusemandleni kangangeminyaka eliqela ukuze iinkampani ezenza izinto ezahlukileyo zeemveliso zazo zingafumani mandla kuzo kwezi ntlobo zemithombo, into exhaphakileyo e-China.
Andazi ukuba yeyiphi indlela eza kuhamba ngayo iParis, kodwa ndenze konke endinako ukucebisa ngokuthe ngqo kwi-POTUS, ngokusebenzisa abanye kwi-WH kunye namabhunga, ukuba sihlale
- uElon must (@elonmusk) Ngamana 31, 2017
Kodwa uTrump, ochasene "nemithetho yemozulu engacacanga" njengoko kuchaziwe kwiphulo lakhe, uxele izolo ukuba kule veki uzakuthatha isigqibo ngalo mba. Kwelakhe icala U-Elon Musk, oyinxalenye yekhabinethi yengcebiso kaTrump, uqinisekisa ukuba wenze konke okusemandleni ukuzama ukukholisa uTrump ukuba angashiyi ukuzibophelela kwe-United States kwinkomfa yokugqibela yotshintsho lwemozulu ebibanjelwe eParis. Kwangoko ngoMeyi, ii-CEO zeenkampani ezingama-30 ezinkulu e-United States zathumela ileta emlumkisa ngeziphumo ezibi e-United States nakwihlabathi liphela ukuba inkampani iyakushiya oku kuzinikela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » UTim Cook ubongoza uDonald Trump ukuba angahambi kwisivumelwano sezulu saseParis
Imbonakalo ye-Safari Technology Preview 31 sele ikhutshiwe